Ku dhashay inuu dhinto, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Rumaysadka Masiixiyiintu wuxuu ku dhawaaqayaa farriinta ah in Wiilka Ilaah uu bini-aadamka ku noqday jidhka meel horay loo sii qorsheeyay isla markaana uu ku dhex noolaaday aadanaha. Ciise wuxuu ahaa qof aad u cajiib ah shakhsiyanna xitaa qaar baa xitaa su’aal geliyay inuu bini-aadam yahay. Si kastaba ha noqotee, Kitaabka Quduuska ah wuxuu had iyo jeer ku nuuxnuuxsadaa inuu isagu runtii isagu ahaa xagga jidhka xagga jidhka - naag ka dhashay - aadane ahaan, marka laga reebo dembigayaga awgood wuxuu innaga ahaan jiray sidayada oo kale (Yooxanaa 1,14:4,4; Galatiya 2,7; Filiboy 2,17; Cibraaniyada). Runtii wuxuu ahaa bini aadam. Imaatinka Ciise Masiix waxaa badanaa lagu xusaa kirismaska, xitaa haddii ay dhab ahaan ku bilaabatay uurkii Maryan, sida ku xusan jadwalka dhaqameed ee Maarso 25-keedii, Iiddii Xuska. (horena waxaa loogu yeeraa Iiddii Qarniga ama rabitaankii Ilaah).
Masiixa iskutallaabta lagu qodbay
In kasta oo aan muhiim u nahay sida aan rumeysanahay rimidda iyo dhalashada Ciise waxay noqon kartaa, iyagu maahan ahmiyadooda koowaad ee farriinta iimaanka ee aan dunida u keeno. Markuu Bawlos ku wacdiyey Korintos, wuxuu faafiyay farriin aad u kicin badan: kan Masiixa ee iskutallaabta lagu qodbay (1 Korintos 1,23).
Dunida Grico iyo Roomaanka waxay yaqiinsadeen sheekooyin badan oo ilaahyo dhasha, laakiin qofna weligiis ma maqal mid iskutallaabta lagu qodbay. Waxay ahayd wax lala yaabo - sida inaad dadka siiso badbaadin haddii ay kaliya rumaystaan ​​dambiile la xukumay. Laakiin sidee ayay suuragal u tahay in dambiile lagu soo furto?
Si kastaba ha noqotee, taasi waxay ahayd barta muhiimka ah - Wiilka Ilaah wuxuu ku dhintay iskutallaabta dusheeda sidii iskutallaabta oo kale sidii dambiilayaal oo markaa ka dib ayuu dib u soo nooleeyey sharaftiisii ​​markii loo soo sarakacay. Butros wuxuu u sharraxay golaha sare: "Ilaahii awowayaasheen ayaa soo sara kiciyey Ciisena. Ilaah baa isaga gacantiisa midigtiisa sare ugu qaaday inuu ahaado Amiir iyo Badbaadiye, inuu siiyo Israa'iil toobadkeen iyo dembidhaafka" (Falimaha Rasuullada 5,30: 31). Ciise ayaa kuwii dhintay laga sara kiciyey oo la sarraysiiyay si uu dembiyadeenna u madaxfuro.
Si kastaba ha noqotee, Butros wuu ku fashilmay inuu galo qaybta xishoodka leh ee sheekada: "... oo aad ku dhegeen qoryaha oo aad dishay." Ereyga "alwaax" shaki la'aan wuxuu xasuusiyay hoggaamiyeyaasha diinta Yuhuudda ee ereyada ku jira Sharciga Kunoqoshadiisa 5:21,23: "... nin la deldelay waa inkaaran yahay Ilaah."
Auweia! Muxuu Butros ugu qasbay inuu sidan keeno? Ma uusan isku deyin inuu xakameeyo buuraha dhaqan-siyaasadeed, laakiin taa beddelkeeda wuxuu ku soo daray arrintan. Farriintiisu maahan in Ciise dhintay oo keliya, laakiin qaabkan sharafdarrada ah. Kani maahan qayb ka mid ah farriinta, waxa kale oo ay ahayd farriinteeda dhexe. Markuu Bawlos ku wacdiyey Korintos, wuxuu rabay udub dhexaadka baahintiisa ma aha oo kaliya inuu fahmo geerida Masiixa, laakiin inuu arko dhimashadiisa iskutallaabta dusheeda. (1 Korintos 1,23).
Galatiya gudaheeda, wuxuu si cad u adeegsaday tibaax gaar ah oo sharraxa: "... kan Ciise Masiix lagu sawiray indhaha iskutallaabta lagu qodbay" (Galatiya 3,1). Muxuu Bawlos xooga u saaray geerida naxdinta leh ee uu Qorniinku u arkay inuu yahay calaamad hubaal ah oo habaarka Ilaah?
Taasi ma waxay ahayd lagama maarmaan?
Muxuu Ciise ugu qasbay inuu u dhinto geeri aad u xun gebi ahaanba? Bawlos wuxuu u badanyahay inuu su'aashan si faahfaahsan wax uga qabtay muddo dheer. Isagu wuu arkay Masiixa sara kacay oo wuxuu ogaa in Ilaah u soo diray Masiixa ninkan. Laakiin muxuu Ilaah ugu daayay kii subkaday inuu u dhinto dhimashada uu Qorniinku u arko habaar? (Muslimiintu ma rumeysnaanayaan in Ciise iskutallaabta lagu qodbay. Indhahooda, wuxuu ahaa nin nebi ah, ilaahayna dhif iyo hoog ma u oggolyahay in sidan oo kale ay ku dhacdo isaga. ahaa.)
Runtii, Ciise wuxuu ku tukaday beerta Getsemane in dariiq kale loo helo isaga, laakiin ma jirin. Herodos iyo Bilaatos waxay sameeyeen oo keliya wixii Ilaah “hore u sii sheegay inay dhacdo” - taas oo ah, inuu u dhinto qaabkan habaaran (Falimaha Rasuullada 4,28; Baybalka Zurich).
Sabab? Sababta oo ah Ciise wuxuu u dhintay annaga aawadeen - dembiyadeenna aawadood - iyo dembiyadeenna aawadood waan inkaaran nahay. Xitaa xad gudubyadayada yar-yar waxay la mid yihiin iskutallaabta lagu qodbo sharaftooda Ilaah hortiisa. Insaanka oo dhan waa inkaaran yahay maxaa yeelay waa dambiile. Laakiin warka wanaagsan, injiilka, wuxuu ballanqaadayaa: "Laakiin Masiixu wuxuu inaga badbaadiyey inkaartii sharciga maxaa yeelay, isagaa inkaar inoo noqday" (Galatiya 3,13). Ciise iskutallaabta lagu qodbay midkeen kasta. Wuxuu qaatay xanuunka iyo ceebta ay mudan tahay inaan qaadno.
Si kastaba ha noqotee, kani maahan tusaalaha keliya ee Baybalku ina tusinayo, Bawlosna wuxuu ka hadlayaa mawduuca aragtida gaarka ah mid ka mid ah xarafkiisa. Inta badan marar badan, wuxuu si fudud u sheegayaa in Ciise "uu inoo dhintay". Jaleecada hore, weedha halkan lagu xushay waxay u egtahay isweydaarsi fudud: waxaan istaahilaa dhimasho, ciise wuxuu si mutadawacnimo ah uugu dhintay innaga, sidaa darteed tan ayaa naloogu daayay.
Si kastaba ha noqotee, si fudud maahan taas. Hal shay, annaga oo bini’aadamka ah weli waan dhimannaa. Dhinac kale oo aragti ah, waxaynu kula dhimanaynaa Masiixa (Rooma 6,3-5). Tusaalayntan kadib, dhimashadii Ciise labaduba waxay ahayd wakiilaheena (wuxuu ku dhintay meeshayaga) iyo sidoo kale kaqeybgal (ie waxaan la wadaagnaa geeridiisa markaan isaga la dhimanno); taas oo si caddaalad ah u caddaynaysa waxa muhiimka ah: waxaa madaxfurashadeena iskutallaabta lagu qodbay Ciise, sidaa daraadeedna waxaa lagu badbaadin karaa iskutallaabta Masiixa.
Tusaalooyin kale oo uu doortay Ciise laftiisu wuxuu adeegsanayaa madax furasho ahaan isbarbardhig: "... Wiilka Aadanahu uma iman in loo adeego, laakiin inuu u adeego oo naftiisa u bixiyo furasho badan" (Mark 10,45). Sidii cadaw naloo qabtay oo dhimashadii Ciise ayaa noo xaqiijisay xorriyadda.
Bawlos wuxuu isbarbar dhig la mid ah samaynayaa isagoo leh waa la soo iibsaday lacag la’aan. Ereygan ayaa laga yaabaa inuu xasuusiyo akhristayaasha qaar ee suuqa addoonsiga, kuwa kalena laga yaabo inay reer binu Israa'iil ka baxaan Masar. Addoommada waxaa laga iibsan karaa si xor ah addoonsiga, oo sidaas oo kale Ilaahay baa reer binu Israa'iilna Masar ka soo iibsaday. Isaga oo u soo diray wiilkiisa, Aabaheena jannada ku jiraa wuxuu si aad ah noogu iibsaday. Wuxuu qaatay ciqaabta dembiyadayada.
Kolosay 2,15 sawir kale ayaa loo adeegsaday isbarbardhiga: «... wuxuu si buuxda u hubsaday awoodaha iyo awooda wuxuuna ku saaray muujinta dadweynaha. Isaga [iskutallaabta] ayuu ku qabtay iyada ku guuleysatay ' (Elberfeld Bible). Sawirka halkaan lagu sawiray wuxuu ka dhigan yahay safka guushu: hogaamiyaha militariga ee guuleysta wuxuu keenaa maxaabiis hubaysan, sharaf dhac ugeysa magaalada. Qoraalkan warqaddii uu u diray Kolosaylos wuxuu si cad ugu caddaynayaa in iskutallaabta lagu qodbay Ciise Masiix wuxuu jabiyay awoodda cadaawayaashiisa oo dhan, wuuna na guuleystay.
Baybalku wuxuu ina siinayaa farriinta badbaadada sawirada ee ma aha qaab qaab qaas ah oo caamil ah, oo aan lagamamaarmaan ahayn. Tusaale ahaan, dhimashadii Ciise ee dhimashadu waa halkii kaliya oo laga dhex arki lahaa sawirro badan oo Qorniinku u adeegsanayo si uu qodobka muhiimka ah u caddeeyo. Sida dembiga loogu sharxay siyaabo badan oo kala duwan, shaqada Ciise ee furashada dembiyadayada ayaa loo soo bandhigi karaa si ka duwan. Haddii aan u aragno dembiga mid jabinaya sharciga, waxaan arki karnaa iskutallaabta dusheeda ficil ciqaabeed halkii ciqaabteynu ahayd. Haddii aan u aragno inay xadgudub ku tahay quduusnaanta Ilaah, waxaynu aragnaa dembidhaafkii Ciise. Hadday taasi wasakhooto, dhiigga Ciise wuu ina maydhaa. Haddaan aragno annaga iyadoo is hoosaysa, Ciise waa Bixiyahayaga, samatabbixiyahayaga guusha. Meesha ay cadowga ku beero, Ciise wuxuu keenaa dib u heshiisiin. Haddii aan ku aragno astaamaha jaahilnimada ama nacasnimada, waa Ciise kan ina siiya ifafaale iyo xigmad. Sawirradan oo dhami waa gargaari anaga.
Cadhada Ilaah Ma Xallin Karaa?
Cibaado la'aantu waxay keenaysaa xanaaqa Ilaah oo waxay noqon doontaa “maalin cadho ah” oo isagu dunida ku xukumo (Rooma 1,18; 2,5). Kuwa "runta caasiya" waa la ciqaabi doonaa (Aayadda 8). Ilaah wuu jecel yahay dadka wuxuuna jeclaan lahaa inuu arko iyagoo is beddelaya, laakiin wuu ciqaabaa haddii ay si isdaba joog ah isaga diidaan. Kuwa ka fogaada runta jacaylka Eebbe iyo nimcadiisa waxay heli doonaan ciqaabtooda.
Si ka duwan sidii qof xanaaqsan oo ay tahay in laga xishoodo ka hor inta uusan is dejin, wuu inala jeclaadaa oo hubiyaa in dembiyadeenna la cafiyo. Marka sidaa darteed looma eryin, laakiin waxay Ciise ugu gudbiyeen cawaaqib dhab ah. Wuxuu ka dhigay kii aan aqoon dembi dembi nagu dembaabay " (2 Korintos 5,21; Zurich Bible). Ciise wuxuu inkaar inoo noqday, oo wuxuu dembi nagu noqday. Sidii dembiyadeenii loo gudbiyey, xaqnimadiisii ​​ayaa inagu soo dhacday "si aynu u noqonno xaqnimada Ilaah ee ku jirta isaga" (lafteeda aayadda). Waxaa ina siiyay xaqnimo Eebbe.
Soo dajinta xaqnimada Ilaah
Injiilku wuxuu daaha ka qaadayaa xaqnimada Eebbe - in isagu xaq yahay inuu inaga cafiyo halkii uu na xukumi lahaa (Rooma 1,17). Isagu ma illoobo dembiyadayada, laakiin wuxuu ku ilaaliyaa iskutallaabta Ciise Masiix. Iskutallaabtu waa calaamad labadaba xaqnimada Ilaah (Rooma 3,25: 26) sidoo kale jacaylkiisa (5,8). Waxay u taagantahay cadaalad sababta oo ah waxay sifiican uga tarjumaysaa ciqaabta dembiga geeri, laakiin waqti isku mid ah jacayl maxaa yeelay kan wax cafiyaa ayaa aqbala xanuunka.
Ciise wuxuu bixiyay qiimaha dembiyadeenna - qiimaha shakhsi ahaaneed ee xanuunka iyo ceebta. Wuxuu helay dib-u-heshiisiin (dib u soo celinta beel shaqsiyeed) iskutallaabta dusheeda (Kolosay 1,20). Xitaa markii aan weli cadawga nahay, wuu inoo dhintay (Rooma 5,8).
Caddaaladdu way ka sarreeysaa sharciga. Ninka reer Samaariya ah ee naxariis leh uma uusan addeecin sharci u baahan inuu caawiyo kuwa dhaawacmay, laakiin wuxuu ku sameeyay wax sax ah isagoo caawinaya.
Haddii ay kujirto awooddeena inaan badbaadino qof ooman, waa inaanu ka labalabeynin inaan sameyno. Oo sidaasay ahayd xoogga Ilaah inuu badbaadiyo dunidan dembiga leh, wuuna sidaas ku sameeyey isagoo soo diray Ciise Masiix. «... waa dib-u-heshiisiinta dembiyadeenna, oo keliya maahan annaga keliya, laakiin sidoo kale kuwa adduunka oo dhan» (1 Yooxanaa 2,2). Wuu inoo dhintay dhammaanteen, isaguna wuu sameeyay "xitaa markii aan weli dembaabnay".
Naxariista Eebbe noogu muujiyo waa astaantiisa xaqnimadiisa. Wuxuu ku dhaqmaa cadaalad isagoo na siiya cadaalad in kasta oo innaguna dembiilayaal nahay. Sabab? Maxaa yeelay, isagu wuxuu Masiix ka dhigay xaqnimadayada (1 Korintos 1,30). Maaddaama aan Masiixi la midoobey, dembiyadeenna ayaa isaga u gudbiya oo aan helnaa xaqnimadiisa. Annagu xaqeenna kama lihin nafteenna, laakiin waxay ka timaaddaa Ilaah oo waxaa inagu siiyaa rumaysadkeenna (Filiboy 3,9).
"Laakiin waxaan ka hadlayaa xaqnimada Ilaah horteeda ka timaada, xagga rumaysadka xagga Ciise Masiix oo u rumeeysan dhammaan kuwa rumaysta oo dhan. Sababta oo ah halkan kuma kala duwana: dhammaantood waa dembilayaal, oo waxay leeyihiin ammaanta ay Ilaah ku lahaan karaan, oo xaqdarro kuma jirto nimcadiisa xagga badbaadinta badbaado ee xagga Ciise Masiix. Ilaah wuxuu u adkeeyey rumaysad sida kafaaraggud oo dhiiggiisa in la caddeeyo xaqnimadiisa oo lagu cafiyo dembiyadii hore loo sameeyey wakhtigii samirkiisa, inuu caddeeyo xaqnimadiisa xilligan in isaga qudhiisa xaq yahay oo xaq ah ka dhig kuwa ka jira iimaanka xagga Ciise » (Rooma 3,22-26).
Kafaaraggudka Ciise wuxuu ahaa qof walba, laakiin kuwa rumaysta oo keliya ayaa heli doona barakada la timid. Kaliya kuwa runta aqbalaa waxay la kulmi karaan nimco. Waxaan u aqoonsanay geeridiisa (dhimashadi uu u dhintay halkii uu innagaga ahaan lahaa, oo aan ka qayb qaadanno); iyo sidii ciqaabtiisa oo kale, waxaan u aqoonsannaa guushiisa iyo sarakicistiisa sidii annaga oo kale ah. Markaa Ilaahay naftiisuu run ugu yahay - naxariis iyo caddaalad. Dembigu waa iska indhatirayaa sidii wax yar oo kale oo ku saabsan dembiilayaasha qudhoodu (Yacquub 2,13).
Iskutallaabta dusheeda, Masiixu wuxuu la heshiiyay dunida oo dhan (2 Korintos 5,19). Haa, adduunka oo dhan wuxuu Ilaah kula heshiiyaa iskutallaabta korkeeda (Kolosay 1,20). Badbaadada waxaa la siiyay dhammaan abuurista wixii Ciise sameeyey! Taasi runtii way ka gudubtaa wax kasta oo aan ku xidhnayno ereyga badbaadada, miyaanay ahayn?
Muhiimadu waa in aynu ku badbaadnay dhimashadii Ciise Masiix. Haa, taasi waa sababta uu u cunay hilib. Si uu noogu hoggaamiyo ammaanta, Ilaah wuxuu ku faraxsan yahay inuu u oggolaado Ciise inuu silciyo oo uu dhinto (Cibraaniyada 2,10). Maxaa yeelay wuxuu doonayay inuu na soo furto, oo wuxuu noqday sidii innaga oo kale; maxaa yeelay isagu wuu ina badbaadin karaa oo keliya.
"Haddaba carruurtu waxay ahaayeen hilib iyo dhiig, isna isaguna wuu u aqbalay si isku mid ah, in dhimashadiisu ay ka qaaddo awoodda kuwa xukunka haysta, oo ah Ibliiska, oo wuxuu soo furtay kuwii ka baqay geeri gebi ahaanba. Noloshu waa inay noqotaa addoommo » (2,14-15). Nimcada Ilaah, Ciise wuxuu ku dhintay midkeen kasta (2,9). "... Masiixu mar buu sillay dambiyadiina, kan xaqa ah xaqdaran, sidaa darteed wuxuu kugu hoggaamiyey Ilaah ..." (1 Butros 3,18).
Baybalku wuxuu ina siinayaa fursado badan si aan uga fikirno wuxuu Ciise noogu sameeyey iskutallaabta. Xaqiiqdi si buuxda uma fahmin sida wax walboo ay “iskumid yihiin”, laakiin waxaan aqbalnaa inay sidaas tahay. Sababtoo ah wuxuu u dhintay, si farxad leh ayaan ula wadaagi karnaa nolosha weligeed ah Eebbe.
Ugu dambayntii, waxaan jecelahay inaan qaato qayb kale oo iskutallaab ah - taas oo ah tusaalaha:
«Waxay inagu dhex muuqatay jacaylka Ilaah dhexdeenna ka yahay in Ilaah wiilkiisa keliya oo dhashay dunida u soo diray si aynu ugu noolaanno isaga. Tanu waa jacayl: ma aha inaannu Ilaah jeclayn, laakiinse isagaa ina jeclaaday oo wiilkiisii ​​u soo diray inuu kafaaraggud u noqdo dembiyadeenna. Gacaliyayaalow, haddii Ilaah sidaa inoo jeclaaday, waa inaynu isjeclaanno (1 Yooxanaa 4,9: 11).